Su'aal ilmogaleenka ku saabsan?
Author Topic: Su'aal ilmogaleenka ku saabsan? (Read 5391 times)
« on: July 24, 2010, 05:05:28 PM »
dhaqtarka waxan weeydiinayaa hadii qof 4 jeer lagu qalay ilmo markii 4 dhaqtarka yiri ilmo galeenkaada waa qafiifay ,mar 5 ma qaadi karaa uur qofkaas?
Re: Su'aal ilmogaleenka ku saabsan?
« Reply #1 on: July 30, 2010, 08:35:20 PM »
walaal takhtarka raaca maxaayeelay ooyadu waa lagu qali karaa caruur badan haddii ay dooneyso laakiin waxa takhaatiirta ay kula taliyaan hooyada in ugu badnaan 3 ama 4 qaliin ay u tahay mid nabdoon lakiin wixii ka badan ay halis caafimaad ku ahaan karto iyada iyo dhallaankeedaba.
Views: 8811 August 13, 2010, 03:34:13 PM
Views: 14218 October 27, 2012, 09:40:12 PM
Views: 13444 September 04, 2011, 04:19:01 AM
Views: 12151 October 02, 2010, 08:11:06 AM
Views: 33267 February 24, 2011, 10:54:29 AM